Semalt Inotsanangura Black Hat Techniques Kuputsika Kwako SEO Campaign
Vamwe vevanowanikwa webhusaiti uye vadzidzisi vekutsvaga vanoona nyevha yeSEO sechinhu chekare, asi hachisi. Kuwana magwagwa chaiwo uye kuva akakwirira-kunotarirwa muGoogle Algorithms ndeye kubudirira uko mutengesi wese wekutsvaga angada kuwana. Zvisinei, vamwe vanoita webhusaiti vanowanzoshandisa maitiro emumvuri ekuvandudza mabhizimisi avo 'kuonekwa uye kuwedzeredza.
Kana zvinosvika kuGoogle kutarisa, kusaziva hakufungi. Kuwana izwi rako rekushandura kuti rive rakakwirira mumagadzirirwo akashandisa mashandisirwo emagetsi anogona kukutambudza mumatambudziko chaiwo neGoogle.
Ivan Konovalov, nyanzvi yepamusoro kubva ku Semalt , anonyevera nezvemamwe magetsi matsvuku uye zvishandiso zvinoshandiswa nevashambadzi vepanhau uye vatengesi vane tariro yekuvandudza mabhizinesi avo kuonekwa uye vanowana magwara chaiwo.
Unoziva here kuti kutengesa nekutsvaga kwezvikwata zvinopfuurira Pagerank ari kuita SEO? Pashure pokutengesa chibatanisi kune muparidzi, funga kupa zano kumutevedzeri zvakakosha zvakanyanya sekubatanidza hukama pa webhusaiti yavo. Kukundikana kuita izvi kunogona kuisa ukama hwehukama hwako neGoogle uye kurangwa nemhaka yekusaziva kunogona kudziviswa munguva refu.
mitsara yakakosha uye keyword stuffing
Kuwedzera mazwi ako ehurukuro muhari yako yemifananidzo ndeye yemhando yehupu yakashandiswa zvikuru nevatengesi. Kunyora yako keyfrase pamusoro wako kungasaita kuti iwe uone, asi zvingakanganisa zvaunoita nevashanyi.
Kugadzira zvinyorwa zvinongororwa nemitsara inokosha
Kare, kusika chinhu chikuru-chekugadzirisa zvingakubatsira kuti uite zvakanyanya mumagariro. Izvo zvave zvichishandurwa nemazuva sezuva ranhasi, kusika zvinyorwa zvinotsanangura pamusoro wehurukuro kana nhepfenyuro zvakanaka zvikuru inogona kuve yakakwirira kupfuura zvayakanaka neyakanaka yezvinyorwa.
Kuwana zvikwata kune nzvimbo dzakaderera-nzvimbo
Kugoverwa kwevashanyi kunobatsira zvikuru kana zvichiuya pakuvandudza kuonekwa kwechiratidzo. Zvisinei, kugovera mabhizimusi pamahofisi akakurumbira ane chinangwa chekuwana zvikwata hazvina kunaka uye kunogona kuisa kowani nzvimbo yako.
Selling advertisement advertisement
Chirongwa chekambani inyanzvi yekasi inosanganisira kutengesa kwemashoko ekubatanidza kune muparidzi. Vatengesi vezvakagumisira vanotaura izvi sekutengeserana, asi Google inotaura seyoyo yekasi yemaitiro..Mumashoko akajeka, kubatanidza chirongwa chinosanganisira kutenga nzvimbo yekutsvaga uyezve kuwedzera kubatanidza kune zvakagadzirwa.
Kugamuchira zvisungo mukutsinhanisa zvinhu zvisingabhadhari
Vadzidzisi vepaIndaneti vave vachitumira zvinhu zvakasununguka kumakambani mukutsinhanisa chikwata chekuongorora chigadzirwa. Iyi mamiriro ezvinhu inofungidzirwa senzira yekasi yeGoogle. Kuti urege kudzidzisa chirongwa ichi chetsvuku uye kugadziriswa neGoogle, funga kuwedzera 'rel = "kwete kutevera" script kuchikwata chako chekuongorora chigadzirwa.
Kushandiswa kwepamusoro-shandiswa mukati mehutano uye hukama huri mukati
Kuwedzera-kugadzirisa mukati mahungano hunoita kuti iwe uite dambudziko rechokwadi. Internal links zvinoreva kuparadzira chibvumirano chako muwebsite yako. Kuti ubate vateereri vako kutarisa nekuita kuti vashandise pawebsite yako, shandisa mutauro wepachimiro uye unobatanidza pane kungofunga nezvekugadzirisa zvakanyanya kutendeuka kwako kwechinyorwa.
Kushandiswa kwemashoko asinganzwisisiki akaenzana kuti ave akakwirira mumararamiro
Kana zvichiitika kune kugadzirwa kwezvinhu , kusikwa kwezvakagadzirwa uye zvitsva zvinokosha zvikuru. Kuwedzera irrelevant keywords muzvinhu zvitsva zvinokonzerwa zvinogona kukutungamirira iwe mukutambudzika chaiyo. Google ine nzira yekutsanangura nheyo chaiyo yezvakagadzirwa uchishandisa Latent Semantic Indexing tool.
Chimwe chinhu chinokanganisa
Kushandisa nzira dzekushandisa kana zvisiri nyore kuongorora zvinyorwa zviripo zvinofananidzwa sehomwe yehope SEO. Kana iwe ukabatwa nemapepa, iwe unoguma uchibhadhara chirango chokudzokorora zvinyorwa. Dzivisa nzira iyi yekasha yekasi kuburikidza nekubhadhara zvinyorwa zvitsva uye zvitsva.
Kushandisa mapeji e-bait uye kuenderera kune mapeji akakwirira
Vadzidzisi vepawenda vane nzira yekuwana peji yakakwirira-yakatarwa ne-algorithms uye ozoshandura peji nemashizha akatsika. Iwe unogona kuguma uchive wakakwirira-unotarirwa kwekanguva, asi Google ichaona nzira yako munguva refu. Gamuchira nzira chaiyo yekutumira nekutumira zvinyatsojeka uye zvekubatanidza pane peji rako.
Nzira dzemafupa dzakawanda dzinowanzoshandiswa nevaridzi vebasaiti uye vatengesi kuti vashandise mabhizimisi avo 'kuonekwa vachishandisa misiyo isina kubhadhara. Kushandisa maitiro emagetsi madema kunogona kuuraya zvachose yako kutsvaga injini kugadzirisa kuripa iyo isiri yakasimba. Panzvimbo yekuwana huwandu hwepamusoro kuburikidza nekushandisa mashizha matsva akadai sekukwikwidzana kwekubatana uye meta tsanangudzo yekugadzirisa, funga kuita chichena chikwata SEO nekuita vatengi vako nekuwana kuvimba kwavo Source .